Hlola iScotland - World Tourism Portal
Okufanele ukwenze eScotland
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eScotland
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eScotland
Bukela ividiyo mayelana neScotland
Hlola iScotland ngobukhulu besibili emazweni ezwe lase-United Kingdom. Inomngcele womhlaba we-96km England eningizimu, futhi ihlukaniswe eNyakatho ne-Ireland ngeNyakatho YeLwandle Lase-Ireland. Inhlokodolobha iyona Edinburgh futhi idolobha elikhulu kunawo wonke I-Glasgow.
IScotland izungezwe amanzi agudla oLwandle Olusenyakatho empumalanga, nolwandle oluseNyakatho ne-Atlantic ngasentshonalanga nangasenyakatho. Kukhona iziqhingi ezingaphezu kwe-700, ikakhulukazi ngamaqembu entshonalanga (i-Inner Hebrides ne-Outer Hebrides) nasenyakatho (i-Orkney Islands kanye ne-Shetland Islands).
IScotland iyizwe elihle elidume kahle ngokubukeka kwalo okumangazayo kwezintaba nezigodi, amagquma agqitshwayo, amasimu aluhlaza namahlathi, kanye nogu oluwugwadule. Ngenkathi wonke umuntu azi amaHighlands ngalokhu, iScotland yinhle ezindaweni eziphansi, eziqhingini nasezintabeni eziphakeme zaseNyakatho-East.
IScotland inamadolobha amnandi futhi anobungane, ngokuvamile abaluleke kakhulu kwezokwakha, nomlando ocebile namagugu avela ezinkulungwaneni zeminyaka ngezindawo eziningi zasendulo nezingokomlando. Ezinye izici eziheha izinkumbi zezivakashi zifaka igalofu (umdlalo wenziwa eScotland futhi unezinye zezifundo ezinhle kakhulu futhi ezidumile emhlabeni), i-whisky (ama-distilleries amaningi angavakashelwa), umlando womndeni (izigidi emhlabeni wonke zivela kulabo abathuthela kwamanye amazwe kusuka eScotland lapho izikhathi zazinzima nge-18th ne-19th century), izintaba, izilwane zasendle kanye nemidlalo yasebusika. Eduze Loch Ness enyakatho yeHighlands, ungakwazi futhi ukuzingela i-Monster… noma okungenani uzame.
Ngenkathi ilanga lingase lingakhanyi njalo, ukwamukelwa ngemfudumalo nokuhlukahluka okumangalisa kwezindawo, izindawo ezakhiwe kanye nokuhlangenwe nakho kusho ukuthi iScotland sinokuningi ongakunikeza noma yimuphi umhambi. Kwesinye isikhathi kuyesabeka futhi kubabazekayo, kwesinye isikhathi kuyabheda futhi kuphele amandla, ukuziqhenya futhi kunesizotha, kwanamuhla, kwasendulo, kuyinto enhle futhi, ebabazekayo abahambi abashiya iScotland bengathinteki ngokuhlangana kwabo.
IScotland inomlando ocebile wamasiko iningi lawo ligcinwa ezakhiweni zomlando ezweni lonke. Izindawo ezingaphambi kokuqala zingalandelelwa emuva ku-9600 BC, kanye namatshe amile aziwa eLewis nase-Orkney. AmaRoma, aholwa nguJulius Caesar e-55 BC, enza incursion yokuqala kepha ekugcineni ahlasela iGreat Britain e43 AD, yathuthuka yangena engxenyeni eseningizimu yeScotland, kepha ayingahlali kuleliya lizwe ngenxa yemizamo yokulwa nokumelana kwezizwe zomdabu zaseCaledonia. AmaRoma aqamba indawo okuyindawo yeScotland “Caledonia” yanamuhla. Namuhla, udonga lukaHadrian oluseningizimu yomngcele weScotland-nesiNgisi lubonwa njengelinye lamasalela aziwa kakhulu amaRoma emhlabeni, ngokuphikisana ngokuhlangana ne-8-metch ku-Naxos.
Njengoba kufanele izwe elalizala, igalofu nayo iyathandwa, nenani elikhulu kakhulu lezifundo zegalofu. Izifundo zegalofu zomphakathi zidlangile, azibizi futhi zisezingeni eliphezulu. I-Tennis isanda kukhula ngokuthandwa manje njengoba umdlali we-tennis waseScotland u-Andy Murray ejabulela impumelelo emiqhudelwaneni emikhulu.
Abantu baseScotland bawuthanda kakhulu umdlalo futhi uhla oluphelele lweminye imidlalo etholakala e-UK luyadlalwa, kunezindawo ezinhle kuyo yonke imidlalo ezingxenyeni eziningi zezwe. Cishe wonke amadolobhana azoba “nendawo yokuzilibazisa” ehlinzeka ngemidlalo nezindawo zokuzivocavoca, edlala izinkundla zemidlalo yangaphandle, kanye / noma indawo yokubhukuda. Kweminye imidlalo ngaphandle kwebhola kanye nebhola lombhoxo, abaseshi baseScotland nabasakazi bezemidlalo benza iqhaza elikhulu emiqhudelwaneni yamazwe ahlukahlukene emidlalweni ehlukahlukene, emelela iGreat Britain.
Ingxenye ezimbili kwezintathu zezifunda ezisenyakatho nomngcele ne-England zalwa iminyaka engamakhulu. Amagquma amahle ahambahamba namasimu amachashazi anamadolobha amahle, izindlu ezonakalisiwe nezindawo zempi.
Ikhaya lezimbongi zikazwelonke uRobert Burns kanye ne-Solway Coast ("iScotland's Riviera"), kanye ne-Isle enhle yase-Arran.
Isifunda samadolobha eScotland kakhulu naseduze naphakathi kwamadolobha Glasgow futhi Edinburgh. Iningi labantu baseScotland lihlala emadolobheni, emadolobheni nasezindaweni ezihlangene lapha.
Izwe laseScotland elimangalisayo, elinezintaba enyakatho nentshonalanga, lihlanganisa iGreat Glen futhi Loch Ness nasephepheni laseBrithani, uJohn'oGroats. Ungavakashela nedolobha elikhulayo le-Inverness.
INorth East Scotland
Iphakathi kwamadolobha ase-Aberdeen kanye neDundee encane, lesi sifunda esihle sisuka ezintabeni zaseGrampian enhliziyweni yeScotland siya ogwini olusempumalanga olukhulu. Kuyisifunda sezwe elihle kakhulu lokulima, amachweba okudoba angajwayelekile, izintaba namagquma, kanye nezinqaba ezinkulu. Kuphinde kube yisizinda sezimboni ezimbili ezibalulekile zaseScotland, uwoyela waseNyakatho Sea kanye ne-whisky.
Iziqhingi eziningi ezisogwini olusenyakatho nentshonalanga yeScotland, zihlukaniswe ngamaqembu e-Inner Hebrides ne-Outer Hebrides. Iziqhingi ezaziwa njengeSkye, iMull, Islay neColonsay eInter Hebrides naseLewis, Berneray, North Uist naseSouth Uist e-Outer Hebrides ngezinye nje zeziqhingi ezihlokomayo lapha. Babelana ngolimi (amaScot Gaelic) namasiko abo amaningi neHighlands.
Iqembu leziqhingi ngokushesha enyakatho yeScotland. Isiqhingi esikhulu kunazo zonke e-Orkney Islands saziwa ngokuthi "i-Mainland" kanti abahlali besiqhingi babizwa ngokuthi ama-Orcadians. Njengoba behlala iminyaka engaphezulu kwe-8000, bayisayithi lezinye izingosi ze-Neolithic ezilondolozwe kahle eYurophu, ezinesimo se-UNESCO World Heritage Site.
Iqembu leziqhingi ezisenyakatho ye-Orkney Islands, ezingxenye ezakhiwe kakhulu ze-United Kingdom. Njengeziqhingi zase-Orkney, zilwelwe yiScotland neScandinavia futhi zombili lezi zici zamagugu azo zibalulekile namuhla.
EScotland, imoto ikuvumela ukuba ufinyelele kunoma iyiphi ingxenye yezwe. Futhi kuyindlela enhle yokuthatha indawo ebukekayo yezintaba, yasemakhaya neyaseHighland. Kodwa-ke, yize iScotland ingeyona izwe elikhulu, ukuhamba ngezimoto kungathatha isikhathi eside kakhulu kunokuba ungakulindela. Indawo yezintaba isho ukuthi ukuwela usuka empumalanga uye entshonalanga kuvame ukufaka izindlela ezijikelezayo.
Ungashayeli uma usuphuzile utshwala. Ukuphuza utshwala akukho emthethweni eScotland futhi akubekezelelwa ngamaphoyisa. Kungaba nzima ukulinganisa ukuthi kungakanani okungaphakathi komkhawulo wezomthetho ngakho-ke umkhawulo ophephile zero. Kuheha ukujeziswa kanzima ngamajaji asenkantolo: Amacala afaka imigwebo yasejele (kufaka phakathi nejele elide uma wenza ingozi ngenkathi udakiwe), inhlawulo enkulu, ukuthathwa kwemoto yakho (ngokusho kwemithetho emisha yakamuva) futhi uma uvela e-UK ukushayela.
IsiNgisi lulimi lokuphatha lwaseScotland, futhi sikhulunywa kahle cishe sonke isibalo sabantu. IScotland Gaelic lulimi lwendabuko lwamaHighlands namaWestern Western, futhi ikhulunywa cishe ngabantu be-33%. IScoots yilona limi lwendabuko nolomphakathi oluseMzansi, futhi iyahlukahluka nesiNgisi kuye ngobuningi nobukhulu - noma kunjalo, cishe wonke ama-Scots asazi kahle isiNgisi, futhi, futhi angakujabulela ukushintsha uma nje eqonda ukuthi ungowakwamanye amazwe.
Izindawo eziningi ezinomlando zigcinwa yi-National Trust of Scotland noma yi-Historic Scotland. Zombili zinikeza ubulungu (ngokufinyelela mahhala mahhala nezinye izaphulelo) unyaka noma impilo yonke futhi zinamalungiselelo okuziphindisela kwabo ngokufana nesiNgisi nesi-Wales. Kuya ngokuthi uthola imali engakanani futhi uhlala isikhathi esingakanani, angakufanelekela ukuthenga. Ubulungu bunomthelela nasekugcinweni kwamasayithi nokutholwa okusha.
Shayela - thatha uhambo lokushayela eScotland.
Ukuhamba ngezithuthuthu - IScotland ineminye yemigwaqo ehamba phambili yokuhamba ngezithuthuthu emhlabeni, yize uzodinga isimo sezulu esihle ukuze uthole okuningi kubo. Ngezindawo ezinhle, ithrafikhi encane engaphandle kwezindawo ezijwayelekile futhi yamukelwa ukuvakasha kwamakhofi kuyinto emnandi yangempela. Kungenzeka futhi ukuqasha isithuthuthu.
Ukuhamba ngebhayisikile - Noma ngabe kunemizila embalwa nje yokuqhathanisa ne-England, iScotland yenza izwe elihle lokuhamba ngamabhayisekili njengoba kunemigwaqo eminingi enama-traffic amancane.
Ukuhamba ngesitimela - IScotland iyikhaya lomzila wesitimela omuhle kakhulu emhlabeni - iWest Highland Line, futhi ukuhamba indawo ngesitimela kunconyelwe kakhulu. Imali yokugibela ingaba phezulu, kepha ubuhle bendawo bungaba yigugu.
I-Hillwalking - IScotland idume ngokuhamba ngezinyawo kwentaba. Ungazama ukukhuphuka yonke i-284 Munros yaseScotland (okuyizintaba eziphakeme kune-914.4 m) futhi ube yiMunroist, noma ungahamba nge-West Highland Way edumile, enweba i-153km, noma ulandele ezinyathelweni zikaRob Roy Macgregor, a Iqhawe labantu baseScotland, ekuhambeni nge-124km. Isikhulu Sezwe Sokuvakasha Sabazwelonke saseScotland sishicilela umhlahlandlela wamahhala weScotland Walks, otholakala kwisiza sabo sokuhamba. Kukhona nesiza esizimele esinikeza imininingwane eminingi emizileni engaphezu kwe-420 - Walk Highlands of Scotland.
I-Whisky Tour - Izifunda eziningi zaseScotland zamukela izivakashi futhi abaningi baqondise izinkambo. Imephu yeScotch Whisky distilleries evulekele umphakathi.
Igalofu - IScotland yindawo yokuzalwa yomdlalo wegalofu kanye nasekhaya enkambweni endala emhlabeni, iSt Andrews. Ibhodi Lezokuvakasha LaseScotland lishicilela umhlahlandlela wamahhala wokuya igalofu eScotland.
Edinburgh Umkhosi wenzeka ngasekupheleni kukaJulayi kuya ku-Mid Septhemba. Umkhosi uyigama lesambulela lemikhosi eminingana, kufaka phakathi i-International Jazz ne-Blues festival, i-Fringe Festival, kanye ne-Literary festival. I-VisitScotland, iBhodi elisemthethweni lezokuvakasha laseScotland, ligcina ikhalenda lemicimbi nemikhosi eyenzeka kuyo yonke iScotland.
Imidlalo Ephakeme - Imidlalo yomdabu 'kanye nemicimbi yamasiko ihlelwe ezindaweni eziningana. Ukuphonsa i-caber, ngokwesibonelo, kwenziwa ngamadoda anamandla enza izingodo ziqede ekugcineni. Kunemincintiswano yokudansa ama-bagpiping kanye neHighland, umhlambi wezinja wezinja (izinja zilusa izimvu), ukudla kwaseScotland neminye imikhiqizo ethengiswayo.
I-Campervan Adventures - Qasha i-campervan bese ushaya umgwaqo ovulekile we-adventure ekhumbulekayo, iholide noma ukuphunyuka. Jabulela ugwadule lwangaphandle nangaphandle kwekamu endle ngokunethezeka okuphelele.
I-Royal National Mod - Umkhosi wesiko likaGaelic owenziwa minyaka yonke ezindaweni ezahlukahlukene eScotland. Kukhona nama-Mods wesifunda. Imicimbi nemincintiswano ifaka lezo zokucula, ukuphinda izinkondlo (ezangempela nezendabuko), ukulandisa izindaba (konke kuseseGaelic, kunjalo), ukubopha izikhwama nokudansa.
Njengakuyo yonke i-United Kingdom, iScotland isebenzisa imali yaseBrithani eyi-Pound Sterling (efushaniswa ne- “£”).
Ama-Euro amukelwa kwezinye izitolo ze-High Street, kepha lokhu akumele kuthembelwe ngakho futhi amanani okushintshana avame ukuba mpofu, ngakho-ke uyalwa ukuba uguqule imali yakho ibe nzima.
IScotland inikezela ngemikhiqizo eyahlukahlukene, izikhumbuzo kanye nememorandamu engatholakali nhlobo kwenye indawo emhlabeni.
Ama-Tartans aseScotland (indwangu yoboya obudonswe ngohlobo lokuhlola) nemikhiqizo ye-tartan (njengama-kilts). Uma unegama lomndeni laseScotland elifana neMacDonald, Campbell, MacLeod, noma MacKenzie (noma abanye abaningi), kungakufanelekela ukuthola i-tartan yomndeni wakho.
Isikhumbuzo sabakhenkethi bakudala siyinto eyakhelwe phansi nakho konke okunye okubandakanya i-tartan. I-katch yangempela ibiza cishe nge- £ 300-400 futhi yenziwe ngoboya obunzima (ngakho-ke ngeke iveze ukuthi yini ongase ugqoke ngaphansi noma ngaphansi komoya onamandla), kepha izitolo eziningi eziyisikhumbuzo zinikeza kuphela ezizi-nyembamba ze-bogus. Uma ufuna ngempela i-kilt yangempela noma izingubo ezijwayelekile zendabuko (ukukhahlela, i-sporran, ijacket, ihembe nezicathulo) indawo enhle ongabheka kuyo isitolo sokuqasha izembatho. Lokhu kukhulunywa ngokuqashwa amasudi namakhilomitha emishado futhi kuvame ukuthengiswa kwesitoko esiqashiwe ngamanani ancishisiwe - uma kungenjalo kufanele ukuthi ukwakhelwe uku-oda - lokhu kuvame ukuthatha amasonto ambalwa. Isethi ye-bogus kilt, i-sporran, amasokisi kanye nama-garters yekhwalithi engathandeki ngezinhloso zesikhumbuzo, ingathengwa ngemali elinganiselwa ku- £ 60-100.
I-kanda yendabuko ephakeme yendabuko yisigaba sendwangu emayelana namamitha ama-6 ububanzi namamitha ama-14 ubude. Lokhu kusongwe ngomzimba lapho-ke sekulethelwa phezu kwehlombe bese kufakwa endaweni yalo, okufana nesigaxa. I-kilt iDemo yanamuhla yethulwa ngesikhathi senguquko yezimboni ukuze inikeze inkululeko eyengeziwe yokuhamba.
I-Whisky nayo iyinto evamile yokuthenga. Kunezinhlobo ezimbili eziyisisekelo - ama-whiskeys ahlanganisiwe enziwe, njengoba igama lisikisela - imalthi eyodwa ehlanganisiwe yahlanganiswa. Qaphela izitolo eziyisikhumbuzo ezithengisa amabhodlela amancane e-whisky ehlanganisiwe ngamanani entengo - ungakwazi kaningi ukwedlula ukungalitholi ibhodlela elifanayo esitolo (noma endaweni yezikhumulo zezindiza) eshibhile kakhulu!
Ama-malt whiskeys abiza kakhulu, futhi kufanelekile ukukhokha i-premium yentengo. Imalaki eyodwa ihluke kakhulu ngokuya ngesifunda noma idolobhana lapho i-whisky yahlakazeka khona nohlobo lwebhali elalisetshenziswa. Ama-distilleries amancane, azimele aziqhenyayo ngekhwalithi yomkhiqizo wawo futhi i-whisky yawo ivame ukutholakala ngenani elincane lezitolo, noma ngisho ngqo. Imalay brand brand eyodwa isathengiswa ezitolo ezinkulu nasezitolo ezisebenza mahhala.
Ongakudla - isiphuzo eScotland
Thepha amanzi eScotland kuphephile ukukuphuza, uma kwesinye isikhathi kucholwa kakhulu. Kwezinye izindawo ezikude noma eNyakatho kungcono ukuvumela umpompi ugijime imizuzwana embalwa ngaphambi kokusebenzisa amanzi ngoba kungenzeka kube nokuphuphutheka onsundu. Lokhu kungenxa yokulandela umhlabathi noma Peat ekutholakaleni futhi akukho lutho oluyingozi. Ngokuvamile North enyakatho uya eScotland amanzi azonambitha kangcono!
IScotland inomnotho okhangayo ovela emlandweni osukela kuma-prehistoric (imijikelezo yamatshe, amatshe amile, imigede yokungcwaba, imisele), amaRoma noma amaRomano-eBritish (amakamu, izigceme, amafulethi, udonga oluvikelayo, amafulethi), izindulo zendulo (izinqaba, izikebhe, amasonto, izindlu , imigwaqo) neyamanje. Njengoba inani elikhulu labantu emhlabeni wonke linamadlozi aseScotland, umlando womndeni uyingxenye ebalulekile yesiko namagugu; Zonke izifunda zinomphakathi owodwa noma ngaphezulu womlando womndeni kanye nemiphakathi yomlando wendawo ezisiza izivakashi ezifuna ukuthola okhokho bazo baseScotland. Futhi uMusa u-O'Malley unethuna eliseduze nenqaba yakhe.